Ukusetha ukuthuthukiswa wonke-round wengane ku ukucabanga okunengqondo kufanele ibe phambili. imisebenzi ukuxazulula emaphazili ukusiza izingane esikhathini esizayo ngokushesha futhi ngokunembile ukucubungula ulwazi.
Ngasiphi yobudala kumele bafundiswe yokucabanga enengqondo?
Isimanga siwukuthi kodwa imizamo yokuqala ukufundisa ingane ukucabanga okunengqondo kufanele kwenziwe kusenesikhathi ungagcina unyaka owodwa ubudala. Isibonelo elula nekilasi enjalo ingase ngiphakamisa mbhoshongo.
Lo mdlalo izosiza ingane yakho ukuhlukanisa phakathi ubukhulu bezinto kanye ukulandelana ukubekwa yabo. Ngemva kokushikashikeka unyaka wonke puzzle okunengqondo tingafundziswa njengoba sorter. Ziyakwazi kakhulu futhi kwenyuswe ukuthuthukiswa ubuchopho ingane ukucabanga ngendlela efanele. Kid kumele ngendlela efanele ukhetha ukuma emihle futhi indawo umgodi oluthile cube noma ibhola (noma ezinye bobunjwa).
Puzzle nazo ziyasebenza izabelo ku logic. Lolu hlobo game akuyona kuphela ifundisa izingane ukucabanga, kodwa futhi evuthiwe inkumbulo ezibukwayo. Izingane, ungasebenzisa izithombe izingxenye ezinkulu, futhi kancane kancane unciphise usayizi futhi ukwandisa inani izakhi puzzle kuncike kwamakhono we ngane.
Logic puzzle izingane zasenkulisa yobudala
Ojahidada kungathatha imininingwane enikeziwe in uhlobo oluhlukile - zibukeke, latimviwa, tactilely. Lapho eneminyaka engu-eminyakeni 3-6 ingane endala ongenza imisebenzi nzima, kodwa udinga ukukhumbula ukuthi kufanele ngaso sonkhe sikhatsi yetfulwe ngendlela imidlalo. Isibonelo esihle izifundo ezinjalo zingaba puzzle okunengqondo ezifana:
Lezi imidlalo kuzosiza ingane yakho ifunde indlela yokwakha amaketanga okunengqondo nokujamela umphumela umsebenzi wabo. Abaklami "Lego", lapho kukhona imidwebo, imidwebo ufunde ukusebenzisa ukwakha ukulandelana komsebenzi.
Ngalesi ubudala, ungenza izithombe, izincwadi noma izinzuzo ekhethekile:
ukuchaza isimo on the Umdwebo;
uthole into extra esikuziphathimandla;
engeza ilungu ulahlekile;
ukwakha Umumo kuncike ezingakanani noma ezime kanjani.
Ngokusebenzisa le misebenzi ingane ifunda ukuhlaziya kanye ukugqamisa izici eziyinhloko, uhlukanise izinto nokuveza abakucabangayo. Zonke lezi amakhono ezibalulekile ukuze iphumelele esikoleni nakamuva ekuphileni esikhathini esizayo.
Umqondo izingane esikoleni
Logic emaphazili ayingxenye ayimpoqo yezifundo zezikole. Kubo, ezingeni azibalulekile kangako bokusungula kwengane. Kukhona cishe ukuza e ukukhalipha Ukugunda futhi ukucabanga ujule.
On ukudayiswa kukhona amaqoqo ekhethekile imisebenzi enjalo kusuka ezingxenyeni ezahlukahlukene. Kungaba zezibalo umsebenzi noma umsebenzi cut izibalo. Popular izinkinga ngekulandzelana emaphazili lanetincetu okufanayo futhi izinti. Asiza ukuze ufunde ukuthi ungalwa ukucabanga kanye nokuthola izixazululo nezimo ezihlukene.
Abathandwayo futhi ewusizo ukuthuthukiswa ukucabanga yilezi:
Rubik sika Cube;
Manje ethandwa puzzle ngokhuni izingane amasethi okunengqondo. imisebenzi enjalo kungaba kwenziwe kusihlwa njengomkhaya. crossword ukuxazulula futhi kunomthelela ukuthuthukiswa yokucabanga kanye ikhono lokwenza izinhlangano ngamaketanga.
Ingane esihlalweni: Kufika ukuthi mdala futhi kanjani?
Garden cleaner wezindlu ukuqoqa amahlamvu: nokubuyekeza amakhasimende. Indlela ukukhetha vacuum cleaner amaqabunga